Lesi Sigaba Sezomnotho sePrimiyamu sitholakalela ukuthuthukiswa kuphela
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Airlines » Lesi Sigaba Sezomnotho sePrimiyamu sitholakalela ukuthuthukiswa kuphela
Airlines • Airport • zezindiza • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Izindaba • Ukukhishwa kwezindaba • Ubuchwepheshe • Transportation • Izimfihlo Zokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • Izindaba ze-UAE Breaking • Izindaba ze-UK Breaking • Izindaba Ezihlukahlukene
Izindiza ezinkulu ze-Emirates 'A380 zibuyela esibhakabhakeni
Izindiza ezintsha ezisuka eDubai ziya eLondon
I-Premium Economy Class itholakala kuphela njengokuthuthuka ku-Emirates
I-Emirates yethule i-A380
I-Emirates imemezele ukuthi izosebenzisa izindiza zayo zakamuva ezihamba phambili ze-A380 eziqukethe izihlalo ezintsha zezomnotho kanye nezithuthukisi zikanokusho kuwo wonke amakamelo eLondon Heathrow.
Kusukela ngomhlaka 4 Januwari, abagibeli abahamba ngezindiza phakathi kweDubai neLondon Heathrow bangathola i-A380 yakamuva yakwa-Emirates. Isebenza njenge-EK003 / 004, le ndiza ihlelelwe ukusuka eDubai nsuku zonke ngo-14: 30hrs, ifike ngo-18: 20hrs eLondon Heathrow. Indiza ebuyayo isuka eLondon ngo-20: 20hrs bese ifika eDubai ngakusasa ngo-07: 20hrs. Zonke izikhathi zasendaweni.
Ngesonto eledlule i-Emirates yethule i-A380 yayo enezihlalo ezintsha sha zomnotho we-premium ezinikela ngezihlalo ezingafika kuma-intshi angama-40, ngaphezu kwezihlalo ezintsha zezomnotho ezifana nalezo ezifakwe ezindizeni zayo zakamuva zeBoeing 777-300ER gamechanger, izithuthukisi ku-A380 yayo edumile IFirst and Business Class ifaka nesiginesha yayo iSower Spa ne-Onboard Lounge, nemibala evuselelwe nokufakwa kuwo wonke amakamelo.
Kuze kube yilapho izihlalo eziningi zePrimiyamu zingena ohlwini lwazo, inkampani yezindiza ihlose ukunikela ngayo njengokuvuselelwa kwamakhasimende ayo anenani ngokokubona kwayo. Zonke ezinye izisayinda ze-Emirates A380 Okokuqala, ezamabhizinisi nezomnotho ziyatholakala ukuze zibhukwe emirates.com noma ngama-travel agents.
Inkampani yezindiza iyibuyisile ngokuphepha futhi kancane kancane inethiwekhi yayo ezinyangeni ezedlule, ibuyisa okuhlangenwe nakho kwesiginesha ebhodini nasemhlabathini ngezinyathelo eziphelele ezenzelwe impilo nokuphepha kwamakhasimende nabasebenzi bayo.
I-Emirates njengamanje isebenza eLondon Heathrow enezindiza ezi-5 zansuku zonke zazo ezine eziqhutshwa nge-A4. Inkampani yezindiza futhi isebenza ngezindiza eziyi-380 ngesonto eziya eManchester, nezindiza zansuku zonke eziya eBirmingham naseGlasgow.
I-Emirates isebenza amadolobha angama-99 emhlabeni jikelele, inika abahambi ukufinyelela okulula eDubai nokuqhubekela phambili ezindaweni ezidumile e-Afrika, eMelika, e-Asia, eYurophu naseMpumalanga Ephakathi.
IDubai ivulekile izivakashi zamazwe omhlaba nezokungcebeleka. Kusukela emabhishi agcotshwe yilanga kanye nemisebenzi yamagugu kuya ezikhungweni zokungenisa izihambi ezisezingeni lomhlaba nezindawo zokuzilibazisa, iDubai inikela ngokuhlangenwe nakho okuhlukahlukene okusezingeni lomhlaba. Bekungelinye lamadolobha okuqala emhlabeni ukuthola isitembu se-Safe Travels kuMkhandlu Wezwe Wokuvakasha Nezokuvakasha (i-WTTC) - esivumela izinyathelo eziphelele nezisebenza kahle zaseDubai zokuqinisekisa impilo nokuphepha kwezivakashi. Ngemininingwane engaphezulu ngezidingo zokungena zabavakashi bamanye amazwe eDubai vakashela: www.emirates.com/flytoDubai.
Ukuvumelana nezimo nokuqiniseka: Izinqubomgomo zokubhuka ze-Emirates zinikeza amakhasimende ukuguquguquka nokuzethemba ukuhlela uhambo lwawo.
Ukuhamba ngokuzethemba: Onke amakhasimende e-Emirates angahamba ngokuzethemba nangokuthula kwengqondo ngomshwalense wokuqala wokuhamba ngobungozi obuningi obunobungozi kanye nekhava le-COVID-19.
Ezempilo nokuphepha: I-Emirates isebenzise isethi ebanzi yezinyathelo kuzo zonke izinyathelo zohambo lwamakhasimende ukuqinisekisa ukuphepha kwamakhasimende ayo kanye nabasebenzi emhlabeni nasemoyeni, kufaka phakathi ukusatshalaliswa kwamakhithi okuncoma okuhlanzeka aqukethe amaski, amagilavu, i-hand sanitiser nama-antibacterial wipes wonke amakhasimende.
UTaliban ufuna iTurkey isebenze esikhumulweni sezindiza iKabul
Izivakashi Zakwamanye Amazwe Ezigonyiwe Zizovunyelwa ...